Lalàna Spamming: fampitahana amin'i Etazonia, UK, CA, DE, ary AU | Martech Zone
Rehefa lasa zava-misy ny toekarena manerantany, dia vita sonia ny fifanarahana hahazoana antoka fa tsy hanaja ny lalànan'ny hafa fotsiny ny firenena tsirairay - mety ho afaka handray fepetra sazy mihatra amin'ireo orinasa manitsakitsaka ireo lalàna ireo aza izy ireo. Sehatra iray ifantohana ho an'ny orinasa mandefa mailaka iraisam-pirenena ny fahazoana ny nuansa isaky ny firenena satria miresaka amin'ny mailaka sy spam.
Raha te hanara-maso ny fametrahana ny boaty fampidirana anao sy ny lazananao ianao dia aza hadino ny misoratra anarana 250ok. Manana fandrakofana ISP manerantany momba ny vahaolana izy ireo ary hanara-maso ny fandefasanao IP manohitra ny lisitra mainty.
Ny kofehy iraisana manerana ny firenena rehetra dia ny manome antoka anao hanoratra ny fomba nifidianan'ny mpamandrika anao, toerana nisafidianany, ary hanohizany mitazona lisitry ny mailaka madio - fanadiovana mailaka voafafa sy tsy mamaly avy amin'ny angona angonao. Ireo fisongadinan'ny infographic:
Etazonia-Etazonia (Etazonia) CAN-SPAM - aza mampiasa fampahalalana lohateny diso na diso, aza mampiasa andalana foto-kevitra mamitaka, lazao ny mpandray ny misy anao, lazao ny mpandray ny fomba hialana tsy amin'ny fandraisana mailaka ho avy ary hanaja ny fangatahana opt-out avy hatrany. Fampahalalana bebe kokoa: CAN-Spam
Canada (CA) CASL - mandefasa adiresy mailaka miorina amin'ny fahazoan-dàlana fotsiny, fantaro ny anaranao, fantaro ny asanao, ary omeo porofo ny fisoratana anarana raha angatahina. Fampahalalana bebe kokoa: CASL
United Kingdom (UK) EC Directive 2003 - aza mandefa marketing mivantana raha tsy mahazo alalana, raha tsy hoe misy fifandraisana efa napetraka teo aloha. Fampahalalana bebe kokoa: EC Directive 2003
Australia (AU) Spam Act 2003 - aza mandefa mailaka tsy ampoizina, ampidiro ny fisoratana anarana miasa amin'ny mailaka rehetra, ary aza mampiasa rindrambaiko fanangon-dresaka. Fampahalalana bebe kokoa: Spam Act 2003
Fitsipika momba ny fiarovana angona federaly alemana (DE) - aza mandefa mailaka tsy ampoizina fa mila manana alalana ianao. Aza manafina ny mombamomba ny mpandefa, manome adiresy manan-kery ho an'ny fangatahana opt-out ary manome porofo fisoratana anarana raha anontaniana ianao. Fampahalalana bebe kokoa: Fitsipika momba ny fiarovana ny data federaly
The Torolàlana an'ny vondrona eropeana momba ny fiainana manokana mihatra amin'ny mpikambana rehetra ao amin'ny EU ihany koa. Araka ny torolàlana an'ny Vondrona Eropeana momba ny tsiambaratelo dia tsy maintsy manana fanekena mazava mialoha ianao alohan'ny handefasana mailaka ara-barotra, safidy mora foana na fialana famandrihana dia tokony ho mora sy mazava ho an'ny mpandray hafatra ara-barotra, ary tokony hanaraka ny lalàna fanampiny fanampiny an'ny firenena .
izany infographic avy amin'ny Vertical Response manasongadina ireo fahasamihafana lehibe amin'ny lalàna momba ny spam amin'ny firenena any Amerika Avaratra sy Eropa.
Tags: hetsika spam australiaaustralia spam act 2003Can-amin'ny spamlalàna spam canadacaslec directive 2003lalàna momba ny spam eropeanaTorolàlana an'ny sendika eropeana momba ny fiainana manokanahetsika fiarovana ny data federaly alemàlalàna spam alemanaamin'ny spamlalàna spamlalàna spamminglalàna momba ny spamlalàna momba ny spam momba ny fanjakana amerikana